Cannabis Transporter Zvikumbiro zveLayisensi muIllinois
Ko iwo mutsva we Illinois mutemo unoti chii nezve Cannabis Kutakura Masangano mukati mehurumende?
Masangano eCannabis ekufambisa anopihwa basa nekutakura cannabis kana cannabis-yakarongedzwa zvigadzirwa mukati meIllinois. Aya masangano anodikanwa kuti atakure cannabis kana cannabis-yakarongedzwa zvigadzirwa kunzvimbo yekurima, murimi wehunyanzvi, sangano rekukanganisa, sangano rinogovanisa, nzvimbo yekuyedza, kana seyakabvumidzwa nemutemo.
Munyaya ino, tichataura nezve zvese zvaunoda kuziva nezve Cannabis Zvokufambisa Mapato muIllinois. Kubva pakutorwa kwemarezinesi, zvinodiwa, uye zvinorambidzwa zvevatakuri kuenda mukuvandudza rezinesi.
Iyo cannabis inotakura masangano muIllinois inoda marezenisi ekushanda. Marezenisi aya anofanirwa kupihwa neDhipatimendi remari kwete papera Chikunguru 1, 2020. Dhipatimendi richaita kuti chikumbiro ichi chigare kubva muna Ndira 7, 2020, uye masangano ese anoda marezinesi ave nemusi waKurume 15, 2020, kuti vaite application.
Mushure meizvozvo, masangano achave ave pakati paNdira 7 naKurume 15 gore rega rega kuita zvawo. Uye kana mazuva ano akawira kupera kwevhiki kana kuzororo, masangano achave aine kusvika rinotevera bhizinesi zuva rekunyorera.
Masangano eCannabis ekufambisa anofanirwa kuendesa mafomu avo ekunyorera marezenisi. Fomu rekunyorera rinofanira kunge riine;
Zvimwe zvinoda kuzodiwa pachirongwa ichi zvinosanganisira:
(1) iyo isingadzorere mari yekunyorera madhora zviuru zvishanu kana, mushure maNdira 5,000, 1, imwe mari sezvakatemwa nemutemo neDhipatimendi rekurima, kuti iiswe muCannabis Regulation Fund;
(2) Mazita ekufambisa femu;
(3) Kero yenyama yekambani, kana imwe ichikurudzirwa;
(4) Izita, nhamba yekuchengetedza munharaunda, kero, uye zuva rekuzvarwa kwevakuru vakuru pamwe nenhengo dzebhodhi; imwe neimwe yenguva iyoyo inofanira kunge iri yemakore makumi maviri nemasere;
(5) izvo zvinyorwa zvekutonga kana kwekutonga kunoitwa mune chero upi zvake wemakurukota makuru kana nhengo yedare
(i) akapiwa mhosva, akaiswa mujeri, akaripiswa, kana
(ii) aive nhengo yebhodhi rekambani kana risingabvumirane nesangano raizvipa mhosva, akasungwa, akabhadharwa faindi, kana kuti rezinesi ravo rakadzurwa kana kumiswa;
(6) inodudzirwa nematare kudzora kambani inosanganisira; chirongwa chaicho chekuverengera kuchengetedza, chirongwa chevashandi, uye chirongwa chekuchengetedza chakabvumidzwa neDare remapurisa chikamu uye chimwe chinowirirana nemitemo yakapihwa mumutemo uyu. Makambani ekufambisa anofanirawo kuitisa vhiki yevhiki hesiki.
(7) kuisirwa kwekuchengetedza kuchengetedzwa kunoitwa pane nhengo dzesimba.
(8) Kopi yazvino yemvumo yemuno yekutenderedza kudzika maratidziro kuratidza fafitera nemitemo yese yenzvimbo yakasimbiswa.
(9) yakatsanangura mazwi ebasa kuratidza kuita mabasa evashandi, uye
(10) kana munhu achinyorera anogona kuratidza ruzivo mune kana bhizinesi maitiro ayo anosimudzira kupiwa simba muhupfumi munzvimbo Dzisina Kubatika;
(11) iyo nhamba uye mhando yemidziyo inoshandiswa nesangano rekutakura kutakura cannabis uye cannabis-yakarongedzwa zvigadzirwa;
(12) kurodha, kutakura, uye kuburitsa zvirongwa;
(13) rondedzero yezvakaitwa nemunyoreri mune rekuparadzira kana bhizinesi rekuchengetedza;
. zita nekero dzemunhu mumwe nemumwe; uye
(15) chero rumwe ruzivo rwunodiwa nemutemo.
Dhipatimendi rekurima richabhadhara marezenisi kuCannabis Zvifambiso Zvemagariro muIllinois, pane mapepa ezvirongwa. Mubairo uchave wakatsamira pakunyatsorongeka uye nekurongeka kwazvinoita kushandisa kwacho, zvakare, uye kunaka kwemhinduro kumashoko anodiwa.
Sangano rinowana 85% uye nezvimwe uye rinosangana nezvinodiwa zvese rezinesi rekutakurisa richapihwa rezinesi mukati memazuva makumi matanhatu rekutumira kunyorera.
Kana kamwe sangano rikawana rezinesi, ruzivo rwese rwunowanikwa mukushandisa, kusanganisira hurongwa hwarwo, richava mamiriro ekubvumirwa emvumo. Kukundikana kuteerera navo kunogona kukonzera chiitiko chekurairira icho chingasanganisira kudzingwa kweisensi.
Masangano anokwanisa kuwana marezenisi anofanirwawo kubhadhara madhora zviuru gumi vasati vatambira marezenisi. Mari iyi inoiswa muCannabis Regulation Fund.
Chikamu 40 - 20 che cannabis mutemo uye mutero chiitiko chinoti chikumbiro chakaitwa neCannabis Transporting Organisation muIllinois chinogona kurambwa kana;
(1) Chikumbiro hachiendese zvinhu zvese zvinodiwa
(2) Chikumbiro chinokundikana kutevedzera mitemo yemunharaunda yekugadza kana zvinodiwa zvemvumo
(3) Chero nhengo yebhodhi kana maofficial officer anotyora zvinodiwa nesangano
(4) Chero vakuru vakuru kana nhengo dzemabhodhi dzesangano iri pazera 21 emakore
(5) Chikumbiro chine ruzivo rwenhema
Kutakura Sangano Zvinodiwa uye Zvinotadzisa
Vese vatambi vane marezinesi vanofanirwa;
(1) Iva nemaitiro ekugadzirisa sangano pamwe neyekutarisa yekutarisa maitiro
(3) Rekodha ese cannabis inotakurwa uye uiise mumudziyo we cannabis kana ichifambisa
(5) Chengetedza chero munhu ari pasi pe21 kure nemotokari dzinotakura cannabis
Yekufambisa Yekutendera Mucherechedzi Kadhi
Zvokufambisa vamiririri vanosungirwa kuve nemakadhi ekuzitaridza makadhi kuti vashande kune chero sangano rekutakura muIllinois.
Kadhi chiratidzo chinomiririra inofanirwa kunge iine;
(i) Zita remumiririri
(ii) Zuva rekubuda uye kupera
(iii) Nzvimbo yakasarudzika yealphanumeric (Inofanirwa kunge iine gumi manhamba)
(iv) Mufananidzo wemuridzi wekadhi
(v) Iri zita repamutemo reiyo transporter sangano iri mushandirwi kumumiririri
Nezve kadhi, iyo Dhipatimendi inorayirwa kuti;
(1) Sarudza kuti ndeapi ruzivo rwekuwanikwa kuburikidza nefomu rekushandisa
(2) Simbisa ruzivo rwuri mufomu rekunyorera uye bvumidza kana kuramba chikumbiro mazuva makumi matatu mushure mekutumirwa
(3) Kutaurisa mumiriri ID makadhi mazuva gumi nemashanu mushure mekubvumidzwa
(4) Bvumira kushandiswa kwemagetsi uye kusimbisa kwekutumira
Iyo Mutemo inoda vamiririri kuti vachengetedze makadhi avo ekuzivikanwa achinge ari pachivako chebhenesi yebhizinesi inotangwa. Ivo vanofanirwa zvakare kudzorera makadhi ekuzivisa kusangano kana chibvumirano chavo chekushanda chopera kana chapera. Kana kadhi rikarasika, mumiririri anofanira kubva ataura kuDhipatimendi reMapurisa reHurumende pamwe neDhipatimendi rekurima.
Kutakura Sangano Kutungamira Cheki
Nyika yeI Illinois inoda kuti cheki yekumashure iitwe kune vese vanogona kuve maofficial officer, nhengo dzemabhodhi, uye vamiririri vezvekufambisa sangano isati yaendesa humbowo kunyorera rezenisi rekutanga.
Kuongorora kwacho kuchaitwa kuburikidza neDhipatimendi remapurisa ehurumende. Vanenge vachizoitwa makurukota, nhengo dzemabhodhi, uye vamiririri vanozodiwa kuti vape zvigunwe zveminwe kuti zviongororwe.
Masangano anofanirwa kubhadhara faindi yemuchakabvu yekutarisa mubairo, iyo ichabhadharwa kumahofisi emapurisa ehurumende.
Kugadziriswazve Kwekutakura Sangano marezenisi uye Mumiririri Dzinoratidza Kadhi.
Iwo marezinesi esangano rekutakura uye makadhi ekuzivikanwa emumiriri anozovandudzwa gore rega kana apera. Dhipatimendi rekurima richapa zvakanyorwa kana zvemagetsi zviziviso zvekushayikwa, mazuva makumi mapfumbamwe zuva risati rabuda.
Masangano eCannabis ekufambisa ari muIllinois anofanirwa kutarisira kuti vadzorere mazuva makumi mana mushure mekuita fomu yekuvandudza kana;
(1) Ivo vanobhadhara mari isingadzoreke yekuvandudza yemadhora zviuru gumi zvakaiswa muCannabis Regulation Fund
(2) rezenisi re sangano harina kubviswa kana kumiswa nekuda kwekutyora chero mitemo
(3) Sangano iri rakashanda sezvirongwa zvakatemwa sechikamu chechishandiso kana shanduko dzakaitwa kuchirongwa uye dzakatenderwa neDhipatimendi rekurima.
(4) Sangano rakaendesa mishumo yekusiyana-siyana sezvinodiwa neDhipatimendi
Masangano ekufambisa anotadza kumutsiridza marezinesi avo nguva dzawo dzisati dzapera dzamira kuita mabasa kudzamara mvumo yavo yavandudzwa. Chero chero makambani anoramba achishanda mushure mekudzingwa marezinesi avo vari pasi pezvirango.
Magengeti ane makadhi ekuzivikanwa apera basa anotarisirwa zvakare kuvanyudza patsva. Vaya vamiririri vanotadza kutevedzera havazotenderwa kushanda kune chero cannabis yekufambisa sangano muIllinois. Uye kana vachidaro, vanozobhadharwa faindi.
Masangano kana vamiririri vanonyengera mukuisa maficha mutero kana kubhadhara mari inokweretwa kuHurumende yeIllinois havazopihwe marezenisi avo.
Kana iwe uchida kuwana rezinesi kune yako cannabis yekufambisa sangano kana vamiririri vako, unofanirwa kufonera gweta re cannabis kuti ubatsirwe.